दंगीशरणमा ३० जनाको पिसिआर रीपोर्ट नेगेटिभ - Tulsipur Khabar दंगीशरणमा ३० जनाको पिसिआर रीपोर्ट नेगेटिभ - Tulsipur Khabar
दिप्तीशिखा चौधरी, दंगीशरण , १५ जेठ
दंगीशरण गाउँपालिकाको क्वारेनटाईनमा अहिले सम्म भर्ना भएका मध्ये ३० जनाको रीपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । जसमा २६ जना पुरुष र ४ जना महिला गरि जम्मा ३० जनाको रीपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरीले जानकारी दिए । उनीहरु सबैको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पिसिआर प्रविधीबाट गरिएको परिक्षणमा रीपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमुख गिरीले जानकारी दिए ।
यस्तै विरेन्द्र मा.वी.मा रहेको क्वारेनटाईनमा बिहीवार मात्र २५ जनालाई भर्ना गरिएको छ । उनीहरु सबै भारत र काठ्मान्डौँ बाट आएको विरेन्द्र मा.वि.क्वारेन्टाईन सयोंजक अनन्त चौधरीले जानकारी दिए । क्वारेन्टाईन संयोजक चौधरीका अनुशार भर्ना हुनेहरुमा वडा न. १ का ५ जना रहेका छन् । उनीहरु भारत बाट आएका हुन् । यस्तै वडा न. २ का २१ बर्षका, २६ बर्षका, २३ बर्षका तीन पुरुष र , १५ बर्षीय एक महिला गरी चार जना काठ्मान्डौँ बाट आएका हुन् भने २६ बर्षका, १८ बर्षका, १९ बर्षका , १८ बर्षका र १९ बर्षका पाचँ जना पुरुष भारत बाट आएको खुलेको छ ।
यस्तै वडा न. ३ क १७ बर्षका, २० बर्षका, ४५ बर्षका तीन जना पुरुष काठ्मान्डौँ बाट आएको खुलेको छ भने १८ बर्षका, ४० बर्षका, १७ बर्षका तीन पुरुष भारत बाट आएको खुलेको छ । यस्तै वडा न. ४ का ६१ बर्षका एक पुरुष काठ्मान्डौँ बाट आएको खुलेको छ भने ४५ बर्षका, ५५ बर्षका र २१ बर्षका तीन पुरुष भारत बाट आएको खुलेको छ । यस्तै वडा न. ५ का २७ बर्षका एक पुरुष भारत बाट आएका हुन् ।
उता श्रीगाउँ स्थित श्री पृथ्वी जनता मा.वी.मा रहेको क्वारेनटाईनमा १० जना भर्ना भएका छन् । भर्ना हुनेमा वडा न. १ का २३ बर्षीय पुरुष २० बर्षीय महिला र २ बर्षको बच्चा रहेको क्वारेन्टाईन संयोजक दिपक के.सी.ले जानकारी दिएका छन् । यस्तै वडा न. ६ का ४२ बर्षका पुरुष रहेका छन् । उनी भारत बाट आएपछि घरपरिवारसंग सम्पर्कमा आएको भन्दै उनका श्रीमती र चार जना छोराछोरीलाई पनि क्वारेन्टाईनमा राखिएको हो । यस्तै वडा न. ६ का भारत बाट आएका २६ बर्षका एक पुरुषलाई पनि क्वारेनटाईनमा राखीएको संयोजक के.सी.ले बताए ।